विवाह र शारिरिक सम्बन्ध बिचको सम्बन्ध के ? – ThePressNepal
विवाह र शारिरिक सम्बन्ध बिचको सम्बन्ध के ?
यौन सम्पर्क गर्नको लागि विवाह गर्ने की नगर्ने । सदगुरु र केही विदेयार्थी बिचको बहस
एक मिसेस भाटिया थिइन उनको ८५ वर्षको वर्षगाठ मनाईन र त्यसको अर्को दिननै ति महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई डिबस दिने निर्णय गरिन यससँगै धेरैले प्रश्न किन यस्तो के भयो तपाइलाई ? किन यति धेरै वर्षमा डिबस ? उनले भननि मेरो श्रीमानले मलाई धोका दिए उनले भनिन मलाई पहिलाका बितेका दिनको धेरै याद आयो मेरा पाँच बच्चामा कोही पनि उनिजस्तो देखिदैनन् त्यसैले मलाई धोका भयो ।
के तपाइलाइ याद छ १० पिढि पहिला हजुरआममा की हजुरआमा कि हजुरआमा कस्तो देखिनुहुन्छ । यो कसैलाई याद छैन तर उनको नाक कुनै अङ्ग आफूसंग मिलेको हुन्छ किनकी जो हामी आफ्नो शरिर भन्छौ हामीलाई याद हुँदैन शरिरले याद सम्हालेको हुन्छ । यसमा धेरै यादहरु रहेका हुन्छन् ।
हाम्रो शरिरमा बंशाणागत जेनेटिक याद, कर्म कि याद, व्यक्त र अव्यक्त यादहरु छन् । हामी हिंडन बोल्न सुन्न सकिरहेका छौ किनकी यो सबै चलिरहेको पनि हाम्रो शरिरमा धेरै यादहरु भएको हुनाले हो जो हामी यो गर्न सकिरहेका छौ । हामी धेरै गर्न सकिरहेका छौ । के खाने के नखाने यो सबै हामीलाई याद भएको हुनाले यस्तो गरिरहेका हुन्छौ । त्यसैले हाम्रो शरिरले धेरै यादहरु जम्मा गरिरहेको हुन्छ जसरी हामी हिडिरहेका हुन्छौ पल पल हाम्रो शरिरले सुगन्ध, दुर्गन्ध, राम्रो, नराम्रो, ठिक, बेठिक धरै यादहरु लिएर हिडिरहेको हुन्छ । यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको हुन्छ ।
जागरुकताका साथ हामी शारिरिक याद पनि बनाउन सक्छौ र सबै यादलाई धेरै शारिरक उल्झनसंग चल्न पनि सकिन्छ । बैंगलोरमा केही मानिसलाइ नुन दिने हो भने उनिहरु भन्छन त्यहाँ राख्दिनुस किनकी उनिहरुले धेरै पदार्थ प्रयोग र पहिचान गरिरहेका हुन्छन् । सजिलैसंग उनिहरु यसबाट परिचित छन् किनकी उनिहरु धेरै याद राख्न चाहाँदैनन् । हामी नमस्कार गर्छौ किनकी हामी याद धेरै गर्न चाहाँदैनौ तर छोयौ भने कुनै दिन शरिरले छोयो भने पुन शरिरले याद राखेको हुन्छ । जसलाइ हामी रुणानुवन भनिन्छ ।
शारिरिक सम्बन्धमा धेरै मात्रामा याद शरिरले राखेको हुन्छ त्यसैले यसलाई धेरै सरल राख्न पर्ने हुन्छ । यसमा नैतिकताको सवाल छैन । यसमा हामी हाम्रो जिवनमा कसरी जिउने भन्नेमा भर पर्छ त्यसैले केही मानिस सादा भोजन गर्ने गर्छन परीक्षाको समयमा सादा भोजन गरेर प्रयोग गरि हेरौ शरिरले कसरी भुमिका खेल्छ । शारिरिक संबन्ध भनेको केवल यादहरु राख्ने माध्यम मात्र हो ।
Previous मिस नेपाल -२०२०को ताज नम्रता श्रेष्ठलाई
Next डोटीमा जिप दुर्घटना एकै परिवारका तीन सहित चार जनाको मृत्यु
निमावि शिक्षक लाइसेन्सका लागि दरखास्त असार ७ गतेसम्म दिन सकिने